Print Page - Su'aal: Muxuu yahay garan waayaye? xageense ugu hagaagaa Daawadiisa?
Diseases and Conditions => Qaybta Su'aalaha => Topic started by: Qal on April 16, 2012, 10:34:40 AM
Title: Su'aal: Muxuu yahay garan waayaye? xageense ugu hagaagaa Daawadiisa?
Post by: Qal on April 16, 2012, 10:34:40 AM
Title: Re: muxuu yahay garan waayaye? xageense ugu hagaagaa Daawadiisa.
Post by: CilmiSabca on April 17, 2012, 12:37:18 AM
Post by: Qal on April 17, 2012, 04:13:02 PM
Title: Re: Su'aal: Muxuu yahay garan waayaye? xageense ugu hagaagaa Daawadiisa?
Post by: CilmiSabca on April 17, 2012, 09:28:11 PM
Post by: Qal on April 23, 2012, 12:20:29 AM
Post by: SomaliDoc on May 20, 2012, 01:19:14 PM